Somaliland Iyo Soomaaliya Oo Wada-hadallo Uga Furmayaan Addis Ababa
Hargaysa (Dhamays) – Wefti uu hoggaaminayo Wasiirka Wasaaradda Duulista Hawada iyo Gaadiidka Cirka Somaliland Farxaan Aadan Haybe, ayaa u kicitimay magaalo madaxda Dalka Ethiopia ee Addis Ababa, halkaas oo uu ka dhici doono kulan ay Somaliland iyo Soomaaliya kaga wada-hadli doonaan maamulka hawada labada Dal.
Wasiirka Duulista oo Saxaafadda kula hadlay Madaarka Hargeysa ka hor intii aanay Ambo-bixin, ayaa faahfaahiyey Ujeeddada Wada-hadallada Somaliland iyo Soomaaliya, waxaanu yidhi “Waxaan u ambabaxaynaa aniga iyo xubno ka mid ah saraakiisha Wasaaradda, magaalada Addis Ababa halkaas oo aanu kulan bilow ah aanu ku yeelanayno hawlihii maamulka hawada ee Somaliland iyo Soomaaliya oo heer Wasiir ah. waad ogtihiin oo muddo dheer bay hawshaasi soo jiitamaysay marxalado badan ayay soo martay shirar badan ayaa jiray oo hore loo soo qabtay, Shirarkii u dambeeyay ee Nayroobi baa jiray markaa kana kii uun buu qayb ka yahay. Waxaanu rajeynaynaa aasaaska iyo udub-dhexaadku waxa weeye sidii loo heli lahaa xal suurto geliya in hawada Somaliland iyo Soomaaliya ay noqoto mid Soomaalida gacanteeda kusoo noqota oo ay wada maamulan karayaan muddo dheer iyadoo ka maqnayd, haddii ay suurto gasho inay wada-hadalladaasi is afgarad ku dhamaadaan.”
Wasiirka oo Hadalkiisa sii wataa wuxuu sheegay “Haddii kale oo ay suuro geli waydo Dawlad waliba go’aan qaadashadeeda iyo xalkeeda ayay ku soconaysaa, run ahaantii anagu rejo wayn baanu ku qabnaa waananu soo dhawaynaynaa wixii kasoo baxana soo noqod kayga ayaan idin sheegi doonaa insha allah.”
Wasiirka ayaa Warbaahintu wax ka waydiisay wada-hadalkan waxa uu kaga duwan yahay wada-hadaladii hore, maaddaama ay muddo xileedkii Xukuumaddana wakhti kooban ka hadhsan yahay, Wasiirka oo su’aashaasi ka jawaabaya ayaa yidhi “Muddada xiliga kala wareega ee mashruuca qaabaynta iyo qalabaynta iyo dhisidda awoodda Madaarada Soomaaliya iyo Somaliland ee ICAO gacanta ku hayso ee markii hore la qorsheeyay saddex sano ayuu ahaa, saddexdii sano waxay ku egyihiin 2018 bisha labaad, inkastoo ay qalabayntu soconayso ilaa bisha 12 ee 2018, markaa maaddaama ay mudadii soo dhawdahay waa isku day inay Soomaalidu isku tashan karto oo ay xal gaadhi karto mana aha wax aynu diidi karno mar walba taladeena iyo go’aankeenu waa meel, laakiin haddii ay tahay madal in la iskugu yimaaddo oo ay tahay aynu wada-hadalno, ma jirto asbaab aynu u diidno”
Dhanka kale, Wasiirka ayaa wax laga waydiiyay haddii ay Soomaaliya ku adkaysato in hawada labada dal laga maamulo Soomaaliya waxa uga qorshaysan waxaanu yidhi “kama hor dhacayo, annagu qorshahayagu waa noo cad-yahay, horena shirkii Nayroobi qodobo ayaa la iskula eegay, waxa la isla eegay suurto-galnimada Qalabka lagu hago hawada ama Diyaaradaha lagu maamulaa sida ay u suurto gelayso ee looga samaynayo Hargeysa iyo Muqdisho, Haddiise ay noqoto in cid kale gacanta loo geliyo waxay noqonaysaa hawl ka madax-bannaan, waayo? markii hore xal Qaramada Midoobay ah ayaa lagu wareejiyay hawada oo ICAO awood la siiyay illaa hadda ma jiro wax xal ah oo lagu celiyay Qaramadii midoobay oo la leeyahay hawadii Soomaali baa qaadanaysa waxaanay ka imanaysaa inaynu inagu isku afgarano dabadeed sidaa Qaramada midoobay ugu gudbino oo ku aqbalno, annagu marwalba waxaanu u taaganahay doonista Jamahuuriyadda Somaliland.”
Wasiirka ayaa sidoo kale ka jawaabay warar ay warbaahinta qaar qoreen oo sheegaya in Madaarka Hargeisa lagu wareejinayo Dawladda Turkiga “Wax walba maaha inaynu u soo bandhigno saxaafadda, waayo waxyaabaha qaar baa u gaara maslaxadda iyo jiritaanka qaranimada Jamahuuriyadda Somaliland oo aan u baahnayn inaanu debada soo dhigno. Horta maaha Dawladda Turkiga ee waa Shirkad Turki ah oo had iyo jeer maalgashi ku sameeya Madaarada, muddo ayuu wada-hadalku noo socday waa markii shanaad ee ay noo yimaaddaan, markaa waxaanu isla eegaynay inaanu ku dhawaano farsamo ahaan sidii ay inoogu dhisi lahaayeen Terminal cusub, maaddaama Terminalka imika inoo dhisan uu kooban yahay oo awooddiisu qaadi karaynin Diyaaradaha imika inoo yimid. siyaasada cusub ee Xisbiga Kulmiye na way ku jirtaa in Terminal cusub in loo dhiso Madaarka Hargeisa, markaa macnaheedu maaha waa la wareejinayaa.”
Previous: Wasiir Cali-Mareexaan Ma Maqlay Odhaahda Caan Baxday ee Ah “Carruur Carruur Aan Lala Ciyaarin baa Jira..”
Next: War Cusub: Guddiga Ilaalinta Anshaxa Doorashooyinka Oo Ganaaxey Xisbiga WADDANI